बिहे गरेको एक वर्षमा नै पुछियो अर्पीताको सिन्दुर ! ( भिडियो हेर्नुस ) – Nepal Trending
बिहे गरेको एक वर्षमा नै पुछियो अर्पीताको सिन्दुर ! ( भिडियो हेर्नुस )
On १७ असार २०७७, बुधबार ०९:२२
वुटवल। रुपन्देहीकी अर्पीता पोखरेलको एक वर्ष पनि नहुँदै सिन्दुर पुछिएको छ । सवारी दुर्घटनामा श्रीमान कृष्णबाबु पाण्डेको निधन भएपछि उनी एक्लो भएकी हुन् । उनका श्रीमान् पत्रकार कृष्णबाबुको शनिवार राति आफैले चलाएको बा ७ च ६९५९ नम्बरको कार कार दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो ।
विवाह गरेको एक वर्षमै कृष्ण अस्ताएपछि वैवाहिक जिवनको रंगिन दुनिया राम्रोसंग बुझ्न समेत नपाई अर्पीताको जिवनको रंग उडेको हो । उनी वुटवलवाल आफ्नो घर तिलोत्तमा जाने क्रममा कार दुर्घटनामा परेका थिए ।
उक्त कारले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल(भैरहवा सडक खण्डको तिलोत्तमा(१ ड्राइभर टोलमा ६ लेन सडक छेउमा राखिएको रेलिङमा ठक्कर खाएको थियो । दुर्घटनामा परेर घाइेत उनको उपचारका क्रममा निधन भएको हो । दुर्घटनामा गुम्भिर घाइेत भएका उनलाई राति नै बुटवलको चौराहा अस्पतालमा लगिएको थियो । चिकित्सकले राति १ वजे नै पाण्डेलाई मृत घोषित गरेका थिए ।
कुष्णले आफ्नै नामको युट्युव च्यानलमा विवाहको भिडियो अपलोड गरेका थिए । २७ अप्रिल २०१९ मा अपलोड गरिएको विवाहको भिडियो अहिले भाइरल भइरहेको छ । भिडियोमा अधिकांशले अहिले हार्दिक श्रद्धाञ्जली लेखेका छन् । पाण्डेको निधनले जिल्लामा कार्यरत पत्रकार शोकमा डुवेका छन् ।